एक करोडको लागतमा खुल्यो यार्सा मिसिएको मिनिरल वाटर उद्योग ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्य > एक करोडको लागतमा खुल्यो यार्सा मिसिएको मिनिरल वाटर उद्योग !
एक करोडको लागतमा खुल्यो यार्सा मिसिएको मिनिरल वाटर उद्योग !
जुम्ला । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने कर्णालीको जुम्लामा पहिलो पटक एक करोड लागतमा ‘यार्सा मिनरल्स वाटर’ उद्योग निर्माण गरिएको छ । पटमारा–८ उर्थुचौतारा जुम्लामा निर्मित उद्योगको हिजो शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले उद्घाटन गरेका हुन् ।
प्रजिअ पण्डितले गुणस्तर राम्रो बनाउँदै लगेमा रसुवामा निर्मित हिमालयन स्प्रिङ उद्योग झैँ अरबसम्म यस उद्योगले पनि यार्सा जडित पानी निर्यात् गर्ने सम्भावना रहेको बताए । अङ्गत महत, जयबहादुर महत, एकराज महत, पदमबहादुर महत, दलबहादुर महतारा र गणेशबहादुर रोकायाको साझेदारीमा उर्थुचौतारामा चार हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा उद्योग निर्माण गरिएको उद्योग साझेदार जयबहादुर महतले जानकारी दिए । उनले १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर शुद्ध पानी, माछापालन, जुस, जेली, जाम बनाइने बताए ।
१६ साउन २०७३, ११।००
२०७३ साउन १६ गते ११:३८ मा प्रकाशित
नेशनल माइक्रोको ३ लाख कित्ता सेयर बजारमा, डिम्याट खाता अनिवार्य !
व्यवसायी रतन संघाई लागू औषध कारोबार आरोपमा पक्राउ !
दिल्ली मोटर एक्स्पो २०१६ मा नेपाली नजर
हाइड्रोको २६ लाख ४० हजार कित्ता सेयर बजारमा, किन्ने हैन त ?